I-iPhone ene-ID yokuthinta ngaphansi kwesikrini izobambezeleka iminyaka embalwa | iPhone News
U-Angel Gonzalez | | Izaziso, Ama-terminals we-IPhone
I-Los iPhone 14 Bazobona ukukhanya ngoSepthemba ozayo. Yize kusasele izinyanga eziningi, amahlebezi mayelana nezindaba kanye nezinguquko zedizayini yomkhiqizo omusha aseqala ukuvela kumanethiwekhi. Maningi amazwi ayeqondisa i-iPhone 14 nge-ID yobuso ehlanganisiwe ngaphansi kwesikrini. Kodwa-ke, kubonakala sengathi ngeke ihlanganiswe ngaphansi kwesikrini, kodwa inothi izosuswa ukuze isondele kumklamo ofana "nephilisi". Amahemuhemu nawo akhombe ukubuyiswa kwe-Touch ID ehlanganiswe ngaphansi kwesikrini, kodwa ukuhlaziya okushicilelwe uMing Chi-Kuo kuyakuqinisekisa lokho kuzomele silinde iminyaka embalwa ukuze sibone lobu buchwepheshe.
Injabulo yethu emthonjeni: I-ID yokuthinta ngaphansi kwesikrini se-iPhone izobambezeleka
Izindaba ezimbalwa ezishicilelwe ezinyangeni ezimbalwa ezedlule zithi i-Apple ihlole uchungechunge lwama-prototypes I-ID yokuthinta ihlanganiswe ngaphansi kwesikrini. Lokhu bekubaluleke ngempela ngenxa yesimo sobhubhane esasikuso lapho i-Face ID yayingasebenziseki nhlobo. Nokho, banqume ukulahla lo mbono, cishe ngenxa yokuthi babezama ukuthuthukisa i-algorithm ye-Face ID ukuze bakwazi ukuvula itheminali ngisho nomaskandi. Futhi kwaba njalo, ngokukhululwa kwe-iOS 15.4.
Amahemuhemu aqhubeka futhi akhombe i-iPhone 14 ene-Face ID ne-Touch ID ehlanganiswe ngaphansi kwesikrini. Kodwa Ming Chi Kuo, umhlaziyi owaziwayo emhlabeni we-Apple, ushicilele i-tweet lapho eqinisekisa khona lokho lobu buchwepheshe ngeke bubonakale ngo-2023 noma ngo-2024, Okungenani njengoba bekuhleliwe. Lokhu kushintsha isibikezelo sikaKuo sokuthi u-Apple wayehlose ukwethula umkhiqizo one-Touch ID ngaphansi kwesikrini ngo-2023.
Ngaphambilini ngangibikezele ukuthi ama-iPhones azosekela inzwa yezigxivizo zeminwe ezingaphansi kwesibonisi/I-ID yokuthinta ngo-2023 ngokushesha nje. Kepha inhlolovo yakamuva ikhombisa ukuthi ama-iPhones amasha ngo-2023 & 2024 angahle angasebenzisi i-Touch ID eboniswa ngaphansi. I-Face ID enemaski ku-iPhone isivele iyisixazululo esihle se-biometrics.
— Ming-Chi Kuo (@mingchikuo) Mashi 30, 2022
I-iPhone 15 Pro izoba ne-Face ID efihliwe ngaphansi kwesikrini
Lokhu akusho ukuthi i-Apple ishiya le phrojekthi ngemuva. Kodwa eminye imisebenzi izobe isinqobile, njengokuthola indlela eya susa unomphela inothi ukuze uhlanganise i-Face ID ngaphansi kwesikrini. Ngaphezu kwalokho, asikwazi ukukhohlwa ukuthi i-iPad Air, ngokwesibonelo, ine-ID yokuthinta enkinobho yokukhiya futhi ngeke kube okungenangqondo ukucabanga ukuthi i-Apple ingaba nentshisekelo yokubuyisela inzwa yezigxivizo zeminwe ku-iPhone kulesi sikhundla. Kuzodingeka silinde kuze kube uSepthemba ukuze sibone ukuthi i-Apple isilungiselele ini nge-iPhone 14!
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » Izaziso » Ama-iPhone ane-Touch ID ngaphansi kwesikrini azobambezeleka iminyaka embalwa
I-Podcast 13x26: Iviki le-Oscar